राज कुन्द्रालाई प्रहरी हिरासतमा पुर्याउने सागरिका को हुन् ? « Etajakhabar
राज कुन्द्रालाई प्रहरी हिरासतमा पुर्याउने सागरिका को हुन् ?
तर नयाँ पुलिस आयुक्त हेमन्त नागरालेले यस विषयमा महाराष्ट्रका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेलाई सिधा रिपोर्ट गर्दैछन र त्यहाँबाट कानून बमोजिम निष्पक्षतापूर्वक व्यवहार गर्ने स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका छन् । उनलाई कसैको हस्तक्षेपको वेवास्ता गर्ने अधिकार दिइएको छ । यस वर्ष फेब्रुअरीमा राज कुन्द्राको बारेमा विवाद आएको थियो । सागरिका शोना नामकी मोडेलले भिडियो जारी गरेर पो र्न फिल्म र के टमा राज कुन्द्राको नाम लिएकी थिईन् ।
यस वर्ष, भ्यालेन्टाइन डे भन्दा तीन दिन अघि, सागरिका शोना नामकी मोडेलले एक भिडियो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिन् । जसले हिन्दी फिल्म जगतमा हलचल मच्चायो। भिडियोमा, मोडेलले शिल्पा शेट्टीको पति राज कुन्द्राको विरुद्ध ग म्भी र आ रो प लगाइन् । त्यसपछि राज कुन्द्राको टोलीले सागरिका शोनाको सो भनाईलाई अस्वीकार गर्न सक्दो प्रयास गर्‍यो र यसले मात्र सागरिकाको बयान प्रकाशित गर्ने मिडिया संगठनहरूलाई ध म्की पनि दिइयो ।
पुलिस अनुसन्धानमा मात्र यो कुरा थाहा भयो कि सागरिका शोनालाई न ग्न भएर अडिसन दिन भनिएको थियो । त्यसो भन्ने उमेश कामत नाम गरेका ब्यक्ति थिए । उनले कुन्द्राको अफिसमा निकै छिटो बढुवा पाएका ब्यक्ति हुन् । राज कुन्द्राको कम्पनीको व्यवस्थापकीय निर्देशकको कार्यकारी सहायकको पदमा पुगेका यो व्यक्तिले के गरे कि कम्पनीले उनलाई कनिष्ठ पोस्टबाट सिधै कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक बनाएको थियो ।
यहि कुराको अनुसन्धान प्रहरीले गरेको छ । त्यसपछि एक एक गर्दै सबै कुरा सार्वजनिक भएको हो । यो घटना सार्वजनिक भएपछि राज कुन्द्राको अफिसले ति ब्यक्तिलाई पदवाट निकालिसकेको छ । तर छोटो समयमै निकै सानो पदमा रहेका ति ब्यक्तिलाई एकै पटक कम्पनीको व्यवस्थापकीय निर्देशक बनाइयो भन्ने कुरा अनुत्तरीत छ । उनलाई निलम्बन गर्नु पहिले नै प्रहरीले कुन्द्रका बारेमा सबै प्रमाण जुटाइसकेको थियो ।
गायक हनी सिंहको पत्नी शालिनीले खोलीदिइन पोल्, सम्बन्धमा आयो भुईचालो, बलिउडमा हंगामा